चितवन मेडिकल कलेजमा गरिएको परिक्षणबाट ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी
By administrator on	 August 25, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय
चितवन । चितवन मेडिकल कलेजमा गरिएको परिक्षणबाट ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
परिक्षण गरिएका १ सय २५ नमुना मध्ये ३१ स्वावको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको हो । चितवनमा २१ र गैंडाकोटमा वाड नम्बर १ मा १ जना सहित नवलपुरमा ३ जना संक्रमित थप भएका हुन् । यस्तै हेटौंडाका १ जना, रोल्पाका ३ जना, गोर्खा २ जना र पर्साका १ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको हो । नवलपुरका ३ जना मध्ये गैंडाकोट १ का २४ बर्षीय १ महिला, कावासोती १३ का ६५ बर्षीय १ महिला र विनयी त्रिवेणीका वडा नम्बर ६ का २३ बर्षीय १ महिलामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टी भएको हो ।
यस्तै चितवन भरतपुरका वडा नम्बर १ का २३ बर्षीय महिला र २२ बर्षीय पुरुष, वडा नम्बर २ का २४ र ५८ बर्षीय २ महिला, वडा नम्बर ३ का १३ बर्षीय बालक र ३५ बर्षीय महिला, वडा नम्बर ७ का २६ बर्षीय १ महिला र ३७ बर्षीय १ पुरुष, भरतपुर १० का २१ र २२ बर्षीय २ महिला, ९ बर्षीय बालक, ४८ बर्षीय २ जना पुरुष, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का २ जना २४ बर्षीय महिला, ४३ बर्षीय पुरुष, वडा नम्बर १२ का २३ बर्षीय महिला, वडा नम्बर २६ का ३१ बर्षीय पुरुष, वडा नम्बर २९ का २१ बर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टी भएको चितवन मेडिकल कलेजका माईक्रोबायोलोजिस्ट डा. नविन कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तै रत्ननगरपालिका वडा नम्बर १० का २ बर्षीय बालिका, वडा नम्बर १५ का २२ बर्षीय पुरुष, राप्ती ८ का ३४ बर्षीय पुरुष, खैरहनी ६ का २१ बर्षीय महिलामा कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । हेटौडा १९ का ७१ बर्षीय महिला, रोल्पा रुन्ती ५ का ६० बर्षीय महिला, ५९ र २२ बर्षीय पुरुष, गोर्खा १० का ३७ बर्षीय महिला, गोर्खा १३ का ४१ बर्षीय पुरुष, पर्सा पोखरिया ९ का २४ बर्षीय पुरुषमा चितवन मेडिकल कलेजमा पिसिआर स्वाव परिक्षण कोरोना पुष्टी भएको चितवन मेडिकल कलेजका माक्रोबायोलोजिस्ट डा. चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ । ३१ नमुना बाहेकका ९४ स्वावको आरटी पिसिआर रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको पनि जनाईएको छ ।